စိတ်အချဉ်ပေါက်မှုများ Archives - Page 12 of 12 - Saturngod
Ban Aagain saturngod.deviantart.com
Posted on Updated January 29, 2008 by saturngod
ပြောလည်း မပြောချင်တော့ပါ။ သိလည်း မသိတော့ပါ။ ပိတ်လိုက်ပြန်ပြီ နောက်တစ်ကြိမ်။ တော်တော်များများ ပိတ်ခံထိတာတွေ့ရတယ်။ Filter System ကြောင့်ပဲလား တမင်တကာပဲ ပိတ်တာလား တော့ မသိတော့ပါဘူးဗျာ။
No electric => No Idea , No Product
အခုတလော မီးတွေ ပြန်ပြီးတော့ ပျက်နေပြီနော်။ တခြားလူတွေတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လေးကို ညစ်တာ အမှန်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မြို့ထဲကိုတော့ မီးက ပုံမှန်မလာနိုင်တောင် တခြား မြို့နယ်တွေထက် အချိန်ပိုတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဗျာ။ မီးက လာပေးစေချင်ပါတယ်။ မလာနိုင်တာတော့ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျာ။ မီးမရှိတဲ့ နေ့လည်တွေဆို ဘာမှ လုပ်လို့မရ။ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတယ်။ ဘာမှလည်း လုပ်မရဘူးလေ။ ကျွန်တော်တို့တွေက Computer သမားဆိုတော့ Computer ရှိမှ idea ထုတ်လို့ရတယ်။ Product တွေထွက်လာအောင် ကြံဆလို့ရတယ်။ e-book တွေ ဖတ်လို့ရတယ်။ စာတွေ ဖတ်လို့ရတယ်။ မီးမလာတော့ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိ။ စာအုပ်ဝယ်ဖတ်မယ် စဉ်းစားပြန်တော့လည်း စာအုပ်ဈေးတွေက လန်ထွက်တယ်။ တရားစာအုပ်ပဲ ဈေးသက်သာတယ်။ ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်တွေက […]
Posted on Updated August 29, 2007 by saturngod
နှမြောဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ပိုက်ပိုက်တွေ…$ 34 တောင်ရနေမှ…Google Adsense က ပိတ်သွားပြီ… အပေါင်းအသင်းတွေ စေတနာကောင်းလွန်းတော့ဒီနေ့ တနေ့တည်း $4 ဝင်သွားတော့ google က မယုံတော့ဘူး…ဒါကြောင့် ပိတ်သွားတာနဲ့ တူတယ်…ခက်တာက google account က ကျွန်တော့် account မဟုတ်ပဲ…တခြားလူ account နဲ့ဆိုတော့ mail က ကျွန်တော့် ဆီရောက်မလာဘူး… ကဲ… google adsense ထည့်မယ်ဆိုရင်…1. English လို page အရင်ရေးထား2. Hit Counter တစ်ခုထည့်3. Hit Counter တွင် အားပါးတရ တိုးထား4. တခြား site တွေမှာလည်းထည့်5. တနေ့ကို $2 ထက်မပိုစေနဲ့ ( လောဘမကြီးနဲ့) တနေ့ကို $1 […]
Posted on Updated May 12, 2007 by saturngod
မင်း…တော်တော်ရက်စက်တဲ့ကောင်ကွာ..မင်းကွာ…တော်တော်လုပ်ရက်တယ်…ငါ့ကို မင်းပေးခဲ့တဲ့ သုခက နည်းနည်းလေးပါကွာ..ငါ့ကို မင်းပေးတဲ့ ဒုက္ခကတော့…ငါ့ကို ကမ္ဘာခြားသွားချင်စိတ်ပေါက်အောင်လုပ်ရက်တယ်ကွာ…မင်းငါ့ဆီက သုခတွေကို ဘာလို့ပြန်ရုတ်သိမ်းသွားတာလဲ…မင်း ငါ့ Hard Disk ကို အလိုလိုနေရင်း ပျက်သွားအောင် ဘာလို့လုပ်တာလဲ…ဒါတောင်မကသေးဘူး.. ငါ့မျက်မှန်လည်း ကျိုးသွားပြီ..ငါ့မှာ အခုဘာကျန်လဲ…ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး…ငါ့ကို အကူအညီပေးတဲ့ လူတွေတော့ရှိပါရဲ့..ဒါပေမယ့်…မင်းက တားဆီးတယ်..ငါ web hosting တစ်ခု လက်ဆောင်ရခဲ့တယ်..ဒါပေမယ့် အထဲလည်းဝင်လိုက်ရော…Access Denied တဲ့…အဲဒါဘာလဲကွ…ငါဘာလုပ်မှာလဲ..အေး..ငါ အံတုပြီးတော့ your freedom နဲ့ဝင်…သည်းခံပြီးတော့ ရအောင်စောင့်ခဲ့တယ်…ငါ့ File တွေတင်ဖို့ ငါရအောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်…နောက်ဆုံးတော့ မင်းက ငါ့ Hard Disk ကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်..ငါ… ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ…ငါ…ငါ့မှာ… ဘာမှ မရှိတော့ဘူး…ရေးထားတာတွေ… ငါမျှော်လင့်ထားတာတွေ…အကုန်လုံး….သွားပြီ…မင်း လုပ်ရက်က ကြမ်းလွန်းတယ်ကွာ…ငါ့ကို နည်းနည်းမှတောင် ညာတာမှုမရှိဘူး..လုံး၀ Data Backup […]